ငါ့ကိုတိုက်မိ - Boys ချစ်ခြင်းမေတ္တာ - Bl - Bl Manga - ဝ Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
ငါ့ကိုတိုက်မိ ပျမ်းမျှ 4.3 /5ထဲက 15
N / A, 70.4K အမြင်များရှိသည်
မန်ဟwa, နေပြည်တော်, Yaoi
Seung-chan ကိုအလေးထားသည်။ သူ၌သူ၏အလုပ်ခွင်တွင်နာရီပေါင်းများစွာလုံလုံလောက်လောက်ရှိပြီးသူသည်အိမ်၌ပင်အနားယူနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ညအချိန်၌တော့အပေါ်ထပ်ရှိတိုက်ခန်းမှတပ်မက်။ ညည်းသံများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများသည်သူ့ကိုနိုးစေသည်။ သူသည်မိမိစရိုက်ကိုအဆုံးသတ်သကဲ့သို့သူသည်သူ့အဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက်ရှိလှပသောထူးဆန်းသော Hyesung ကိုတွေ့နိုင်သည်။ အကယ်စင်စစ်ထိုညစ်ညူးသောအသံအားလုံးသည်အလွန်လှသည့်ပါးစပ်မှလာ။ မရပါ။ ဒါပေမယ့် Seung-chan မကြာခင်မှာပဲသိသွားတော့ Hyesung အတွက်အများကြီးပိုများပါတယ်
သင်သည်များစွာသောရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် manga အခမဲ့ဖြစ်သည်
အခန်းကြီး 47 မေလ 2, 2021
အခန်းကြီး 46 မေလ 2, 2021
အခန်းကြီး 45 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 44 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 43 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 42 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 41 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 39 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 38 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 37 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 36 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 35 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 34 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 33 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 32 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 31 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 30 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 29 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 28 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 27 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 26 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 25 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 24 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 23 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 22 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 21 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 20 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 19 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 18 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 17 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 16 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 15 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 14 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 13 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 12 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 11 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး 10 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
အခန်းကြီး9ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020
အခန်းကြီး 8 ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020
အခန်းကြီး7ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020
အခန်းကြီး6ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020
အခန်းကြီး5ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020
အခန်းကြီး4နိုဝင်ဘာလ 11, 2020
အခန်းကြီး3နိုဝင်ဘာလ 11, 2020
အခန်းကြီး2နိုဝင်ဘာလ 9, 2020
အခန်းကြီး 1 နိုဝင်ဘာလ 9, 2020
ဇြန္လ 10, 2020
ဇြန္လ 9, 2020
ဇြန္လ 11, 2020
Manga By Browse
sek Iaiaiai (35)
manga ကို (65)
အဘယ်ကြောင့် Boyslove.me အပေါ် Boys Love Webtoon၊ Boys Love Manga၊ Bl Webtoon Hentai၊ Yaoi Manga၊ Bl Manga Hentai
Bl, ယောက်ျားတွေရဲ့ချစ်ခြင်း, ယောက်ျားလေး x ယောက်ျားလေး, ယောက်ျား x ယောက်ျား, yaoi... bl ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? yaoi ဘာကိုဆိုလိုသလဲ? ဤစကားများသည်ယနေ့ခေတ်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလူကြိုက်များသနည်း။
Bl ယောက်ျားလေးများ၏အချစ်၏အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ် ရင်ခုန်စရာလုပ်ရပ်များနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်ပါဝင်သောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် bl ဒရာမာ (ပုံမှန်အားဖြင့်) နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောယောက်ျားလေးများအကြား။ BL စာဖတ်သူများအများအားဖြင့်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏စာရေးသူများမှာပုံမှန်အားဖြင့်ပန်းချီဆွဲလိုသောအမျိုးသမီးများဖြစ်သည် bl ဒရာမာ, bl manga, နှင့် BL fanfiction ။
သင်ဖတ်လို့ရပါတယ် ရုပ်ပြ အလွယ်တကူအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူအခြားအမျိုးအစားများကိုခံစားပါ bl anime, ရုပ်ပြနှင့် bl ဂိမ်းများ အကောင်းဆုံး bl website [website ကိုထည့်ပါ] မှာ။
Yaoi ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်ယောက်ျားလေးများကိုချစ်သောဂျပန်စကားလုံးဖြစ်သည်။ ယောက်ျားနှင့်ယောက်ျားစပ်ကြားချစ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်း။ ဆိုလိုသည်မှာများစွာသောကိုဆိုလိုသည် yaoi ဒရာမာ နှင့် yaoi ရုပ်ပြ ဒီအချစ်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာ yaoi ဒရာမာ manga စာဖတ်သူတွေထဲမှာ yaoi doujinshi ပါ ၀ င်ပြီးစာရေးဆရာတွေက My Hero Academia, Naruto, One Piece, Yuri စတဲ့တရားဝင် manga ထဲမှာယောက်ျားဇာတ်ကောင်တွေရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုရေးတဲ့နေရာပါ။ yaoi anime ကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်၊ yaoi manga(သို့) yaoi ဂိမ်းများ၊ [ဝက်ဘ်ဆိုက်ထည့်သွင်းခြင်း] သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်အခမဲ့သောပူပြင်းသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် yaoi အချစ်ဇာတ်လမ်း၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုပေးသည်ကိုသင်သိသင့်သည်။ ကြည့်ပါ၊ သင်စွဲလိမ့်မည်!
© 2019 Boyslove.me Inc.
← Back to ကောင်လေးများချစ်ခြင်းမေတ္တာ - ဘလန်းမန်း - ဘ ၀ ဝက်ဘ်ဆိုက် - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai